Maxaa loola jeedaa sii deyntu? Fiiri qeexida Lexicon Financial
Start daymaha -Leaks credit Transfer
Waa maxay kaarka deynta?
Waxay doorteen gaari cusub ama dhisto guri cusub. Xaaladdan, waa inaad diiwaangelisaa deyn. Waxaad arki doontaa in deyntu ay hadda tahay munaasabadda ugu dambeysa ee dad badan oo aadan waxba ka qaban karin. Sidaas darteed haddaad u baahan tahay deyn hadda oo ay tahay in aad ka dalbato bangigaaga guriga, markaa wax dhibaato ah ma laha. Xitaa waxay u shaqaysaa si aad u fiican isticmaalka deymahan. Deynka laftiisa waxaa lagu xidhaa qandaraas gaar ah. Adiga iyo qof ka socda bankiga ayaa saxiixaya qandaraaskan. Heshiiska deynta ayaa ku jira dhammaan shuruudaha suurtagalka ah ee raacaya qandaraaska. Waxaa lagu tusi doonaa qorshe kuugu rakib isla waqti isku mid ah. Waxaad isticmaali kartaa tan si aad u hubiso sida miisaanku u socdo. Hadda waxay dhici kartaa inaad rabto inaad dhakhso u hesho adigoo dib u bixinaya amaahdaada. Markaad iibsato guri, badanaa waxay qaadataa tobanaan sano kahor inta aan la bixin deynta. Hadda waxaa laga yaabaa in aad lacag badan aad ujoogsatid, oo aad u maleyneysey inaad ku kicinayso amaahda aan hore loo dhigin. Taasi waa markaa credit Transfer, Si kastaba ha noqotee, deynta layskula sii-dari kari waayo. Si xawaalad ah uguma wareejin kartid xisaabta bankiga. Hubi in aad raadinayso wada-hadal la-taliyaha bankiga ka hor. Halkaas waxaa lagu ogeysiinayaa in deyntu ay kicin karto waqti hore.
Qoraalka deynta ayaa sidoo kale toos looga wada hadli karaa wicitaanka creditka. Waa inaad hubisaa inaad si sax ah u wareegi karto isla markaana aad u hubiso inaad adigu rabto. Haddii aadan hubin, waxaad ballan ka qabsan kartaa bangigaaga wakhti kasta. Hubi in ay tahay mid daacad ah sida ugu macquulsan. Way fiicantahay haddii aad si toos ah u sheegto kaarka deynta. Tani waa sida lataliye bankiga kuu diyaarin karo dalab fiican oo aanad ku sugneyn waqti dheer ballanta. Jeegga deynta ah waa asaas fiican haddii aad rabto inaad isticmaasho. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad sidoo kale eegtaa xaaladaha dhabta ah.
Sidaas awgeed waa inaad hubisaa inaad wax kasta oo saxda ah sameyso, ka dibna waad arki kartaa haddii aad heshay la taliye wanaagsan. Maanta waxyaabo badan ayaa shaqeeya laakiin jeegaaga deynta waa in lagu hayaa heshiiska haddii ay macquul tahay. Tan waxaa badanaa la isticmaalaa marka qof uu iibsado gaari cusub. Kadibna wax badan ayey u dhacdaa. Qeybta ugu badan ee baabuurta horay loo bixin karaa inta ka horeysa bixinta dhabta ah. Tani waa xitaa mid aad u wanaagsan oo sidoo kale la doonayo. Sidaa daraadeed xisaabinta deymaha ayaa ah hab wanaagsan oo midkastaa uu noqon karo mid deynta ah oo dhakhso ah. Si kastaba ha noqotee, waa in lagula taliyaa inaad bixiso amaahda muddadeeda. Si kastaba ha ahaatee, wadahadal lala yeesho la-taliyaha bangiga ayaa wanaagsan. Tani waa sida aad uga fogaato dhibaatada aan loo baahnayn. Lacagta si ay u bixiso xisaabta bangiga waa khalad. Waa inaadan. Waxaad noqon doontaa badbaado markaad la xiriirto lataliyaha bangiga adigoo e-mail ugu diraya ama ugu shakhsi ahaan. Maanta ayaa la hadlaya dahab. Qofku wuxuu la hadli karaa dadka oo idil, wuxuuna sidoo kale ku heshiin doonaa cashuur celinta. Sidaa daraadeed daacad ah iskudayow nasiibkaaga. Eeg qandaraaska aad heshay marka deynta la dhammeeyey.
Maqaalka horecredit lacag caddaan ah
Maqaalka xigtakhatarta credit